IFTIINKACUSUB.COM: Muxuu arkay nabigu (scw) isagoo lasocda Jibriil iyo Miika’iil?
Waxa laga wariyey Samur ibnu Jundub inuu dhahay: Rasuulka Ilaahay (ﷺ) wuxuu ahaa mid waydiiya asxaabtiisa, "Mid idinka mid ahi ma arkay Riyo?" wuxuu yidhi Samura: waan uga warrami jirnay wixii aan ragnay, wuxuuna dhahay Rasuulku subax: "Hase ahaatee xalay waxa ii yimid laba nin oo i kaxeeyey, waxayna igu dhaheen ina mari waanan raacay..
waxaana ku dhahay: waxaan arkay caawa mucjiso ee waamxay waxaan araky? waxay dhaheen waan kuu waramaynaa: ninkii koowaad ee aad aragaty in madaxiisa la jajabinayo wuxuu ahaa nin Quraanka qaatay, (bartay) kana seexday salaadii faralka ahayd. Ninkii kale ee dhabankiisa la jarjarayey, sidoo kalena la jarjarayey ishiisa iyo sankiisa illaa qadaadka, waa nin kasoo kallaha gurigiisa, wuxuuna sheegayaa been, beentaas oo gaadhaysa Aduunka oo dhan.
Ragii iyo dumarkii qaawanaa ee ku jiray dhismihii u ekaa moofaduna waa nimanka sinaysta iyo dumarka sinaysta. Ninka dabaalanayey wabigana ee lagu tuurayey dhagaxuna wuxuu ahaa nin cuna ribada. Ninkii muuqalkiisu foolxumaana waa Maalik, khasnad hayaha naarta. Ninkii beerta dhexdeeda joogayna wuxuu ahaa nabi Ibraahiim (scw), caruurtii hareertiisa joogtayna waa ilmo kasta oo ku dhashay fidrada.
Qaar kamid ah saxaabadii ayaa tidhi: Rasuulkii Ilaahayoow, xitaa caruurta gaaladu maku jiraan? wuxuu yidhi: xitaa caruurta gaalada (way ku jiraan). Qoomkii aad aragtay in qeyb kamid ah ay qurxoonayd, qeyb kalena ay foolxumayd waxay ahaayeen qoom isku dhex daray camal wanaagsan iyo camal xun, oo Ilaahayna ka dhaafay. 